Libra, ဧပြီလ 2017 Tarot တိရိစ္ဆာန် Totem အခမဲ့အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > Libra, ဧပြီလ 2017 Tarot တိရိစ္ဆာန် Totem အခမဲ့အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း
Megan မတ်လ 23, 2017 ဗီဒီယိုများTagged အဘိဥာဏ်လအော adimmix, တိရိစ္ဆာန် Totem ..., ကုံ, aries, ဗေဒင်အတတ်ပညာ, ကင်ဆာ, capricorn, ကျောက်သလင်းကလေးများအဘိဥာဏ်စာအုပ်များ, Esotericism, အခမဲ့အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ချက်တင်, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, ကျွန်မဖတ်ပါ, ပေါင်ချိန်, အဘိဥာဏ်အသကျရှငျ, အဘိဥာဏ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်, တိုက်ရိုက်လွှအကြားအမြင်, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်, အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုချစ်, merkaba, merkabah, merkeba, အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်, ဖုန်းကိုအဘိဥာဏ်, Pisces, အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်လအော, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်ဖတ်, အကြားအမြင်, Sagittarius, scorpio, ဝိညာဉ်ရေးရာအဘိဥာဏ်ဖတ်, Taurus, သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စမ်းသပ်ရန်, အဘိဥာဏ်ဟာကြည်လင်ကလေးများ, virgo14 မှတ်ချက် Libra, ဧပြီလ 2017 Tarot တိရိစ္ဆာန် Totem အခမဲ့အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းအပေါ်
ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါ Tools များ - http://vickieverlie.com/index.php/decks/
pollys သန်းပေါင်းများစွာသော says:
မတ်လ 23, 2017 မှာ 10: 43 နံနက်
thankyou ဤမျှလောက် Ive ကောင်းသောဘဏ္ဍာရေးကိုထင်ရှားစွာပြဖို့ကြိုးစားနေမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆွဲဆောင်မှု၏ဥပဒေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနဲ့ကိုယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားခဲ့ရပါပြီကြောင့်ငါ 14th ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်လည်း april ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် 14 ငါ့ထံသို့တွေအများကြီးသဘာဝကျပါတယ်
လွှတ်ခြင်းအခွင့် Starr says:
wow ကိုသင် Vicky ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, Sigil တစ်ဦးမှော်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်အမှတ်တမဲ့မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ငါဆက်ဆက်အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုငှါလာကြပါလိမ့်မယ်, ငါသည် (ထိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ) မြင့်မားသောအဆင့်မှာထင်ရှားစွာပြဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ်အဘယျသို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အိုးငါသိ (& သူ), မစိုးရိမ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မာရျနတျ - ကျွန်ခံကဒ်နှင့်ဖွင့်ဖွင့်ပြောပါရစေ, ကသင်ကျွန်လက်ကောက်ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်အများဆုံး uncanny နှင့်လျောက်ပတ်ရဲ့; -) ။
ဣဇာက်သည် Mitchell က says:
Sigil တစ်ဦးမှော်ရဲ့သင်္ကေတက x ဖြစ်ပါသည်
လှပသောကျေးဇူးတင်ပါသည် ?????? သငျသညျမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို x
Tarot SoulChild Mk အလိုလို Reader ကို says:
ရွှင်လန်းငါ၏ချစ်! မင်္ဂလာသက်) (
M ကသာဒိ says:
Sigil - 1) heraldry 2) မှော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်နိမိတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ပုံရိပ် (up ပြုလုပ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည် - ပြည့်စုံသော Vocab ရှိခြင်းများအတွက်ဤမျှလောက်)!
? Libra နေ, Scorpio? လီယို ... Rising ????
ဆဗီးနား Marcus says:
ကိုယ့်အနေနဲ့လေ့လာပေမယ့်ကတ်များအားပြန်လုပ်များမှာဖြစ်ကောင်း shuffle တောင်းထဲ၌အခါအကောင်းဆုံးကြားတွင်
စင်သီယာ Delira says:
မီချီဂန်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball 141,000,000 သန်းဖြစ်ပါတယ်
မှေးမှိန် NCS says:
အဆိုပါ vids ကိုချစ်